…पछि एसएसपी न्यौपानेलाई लखेटी लखेटी मारे – YesKathmandu.com
…पछि एसएसपी न्यौपानेलाई लखेटी लखेटी मारे
आइतबार १३, भदौ २०७२
मैले फायर खोलेँ,तपाईँहरू पनि खोल्नुहोस्, अब आदेश पर्खिराख्नुपर्दैन।’ थरूहट/थारूवान स्वायत्त प्रदेश पक्षधर आन्दोलनकारीले गत सोमबार दिउँसो दिउँसो साढे २ बजेतिर टीकापुर नगरपालिका शंकरापुरमा प्रहरीमाथि घेराबन्दी गरेर आक्रमण सुरू गरेपछि नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेले आदेश दिए।
आदेशमुताविक उनीसँग रहेका प्रहरीले एसएलआर खोले। एक राउन्ड हावामा गोली चलाए। दोस्रो पटक एसएलआरको गोली पड्कदै पड्किएन त्यसै बन्द भयो। प्रदर्शनकारीको घेराबन्दीमा परेको प्रहरी टोलीसँग थप हतियार थिएन। उनले सँगै परिचालित सशस्त्रलाई फायर खोल्न अनुरोध गरे तर हतियार सुसज्जीत उनीहरूले उनको आदेश मानेनन्। त्यतीबेलासम्म सँगै गएका सशस्त्रका एसपी लक्ष्मण सिंह भने पछि हटिसकेका थिए। आन्दोलनकारीले प्रहरीलाई घेरबन्दी गरेर लखेटी लखेटी एसएसपी न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या गरे। यति ठूलो मानविय क्षतिको पछाडि के कारण थियो त ? नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्- प्रहरीसँग हतियार नहुनु, विशाल जुलुस नियन्त्रणका लागि न्यून संख्यामा सुरक्षाकर्मी हुनु र सहयोगी सशस्त्र प्रहरीले आदेश छैन भन्दै हतायार चलाउन पन्छनु। त्यसदिन टीकापुरमा परिचालित प्रहरीसँग एक थान मात्र एसएलआर थियो। त्यही पनि नपड्किएपछि न्यषौपाने निरूपाय भएका थिए।
सुविधा र प्रशिक्षण दिनुस्, हामी अन्तराष्ट्रिय स्तरमै परिणाम दिन्छौं
‘म प्रमाणसहित भन्छु–टीकापुर हत्याकाण्ड बर्षमान, जनार्दन, देव गुरुङ र अपराधिक समुहको योजनामा भयो’
One thought on “…पछि एसएसपी न्यौपानेलाई लखेटी लखेटी मारे”
कारन प्रस्टछ पुलिस प्रसासनले गर्ने काम नगरी तानासाहिदेखाको प्रमानित हुन्छ जसको परिनाम ती सुरक्षाकर्मिबाहेक अरुले पनि भोगे
पूर्वयुवराज पारसले मच्चाए फेरी अर्काे उपद्रो, पोखरामा होटल मालिक कुटे
गृहमन्त्रीको निर्देशनमा एसकाठमाडौ डटकमको कार्यालयबाटै दुई पत्रकार पक्राउ
दाङमा एक बालिका बलात्कृत
प्रहरीद्वारा गोपीकृष्ण हलमा छापा, जुवा खेलाइरहेका हल म्यानेजर पक्राउ
उमेर नै नपुगेका पूर्व आइजिपि खड्गजीत वरालका नाती म्यादी प्रहरीमा पास ?
चितवनमा एमालेको विशाल शक्ति प्रर्दशन, १६ किलोमिटर सडक ढाक्यो अभियानले
डा. तुलसी गिरीलाई उपचार खर्च दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको प्रस्तावमा गगन थापाको आपत्ति